राजकुमारी सेलेस्टेियाको एक युवतीको विद्यार्थी छ। उनको नाम सन स्पार्क छ। निरन्तर अध्ययनबाट पटकालाई विचलित गर्न, सेलेस्टेिया उसलाई र स्पाइक पठाउन टनीभिलेमा पठाउँछ। यो टोक्यो नयाँ मित्रहरू भेट्छन्। तपाईं "शक्तिशाली बलियो टट्टू" कसरी आकर्षित गर्न पत्ता लगाउन अघि, यो कार्टूनको मुख्य क्यारेक्टर सावधानीपूर्वक विचार गर्न सार्थक छ।
ग्वाइलाइट चर्क एक गुनासो हो। यसको रंग बैंगनीको आधारमा छ। Iskorka को शरीर मा एक सेतो तारा हो, माथि एक छ, गुलाबी छ। वरिपरि पाँच र सेतो सानो ताराहरू छन्। Iskorka अध्ययन को धेरै शौक छ।
राजकुमारी सेलेस्टेियाले सूर्यलाई लुकाउँछ। उनको लामो सींग छ। त्यो लामो छ र सुन्दर पंख छ। सेलेस्टियाको पूरै र म्यानले तीनवटा आकारहरू: बैंगनी, फिरोज़ा र गुलाबी। शरीरले सूर्यलाई चित्रण गर्दछ।
इंद्रधनुष ड्यास एक पेगासस हो। त्यो गुलाबी आँखहरू, साथसाथै एक बहुमुखी पूर र म्यान छ। इंद्रधनुष धेरै साहसी छ। यसले बादलहरू फैल्यो। शरीरमा - तीन क्लाउडको इंद्रधनुष एक क्लाउड जुन: रातो र पहेंलो।
Pinky Pye एक टट्टू हो, जुन सधै रमाइलो छ। यो गुलाबी सुन्दरताको सुन्दर घुमाउरो बाली छ। त्यो मिठाईहरुलाई बेपत्ता छैन। उनको हिपमा उनको तीन गुब्बारे छन्।
यो सबै कार्टून क्यारेक्टर होइन। र अब हामी कसरी "म्याटो लिटिल टट्टू" आकर्षित गर्न सक्नेछौं। ग्वाइटलाइट स्पार्कको साथ सुरू गरौं।
त्यसोभए, हामी "थोरै टट्टनी" चरणहरूमा थियौ। यो धेरै गाह्रो छैन। पहिलो चरणमा, हामी एउटा सर्कल आकर्षित गर्छौं र स्पार्कको चहचहाना चित्रण गर्छौं। हामी एक कान र एक सींग जोड्दछौं। तुरुन्तै तपाईं चित्रण र बंगाल गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक हामीले अनुहारका भागहरू पूरा गर्यौँ। हामी ठूला आँखा, मुख र नाक चित्रण गर्दछौं। तपाईं शरीर रेखाचित्र सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। खुट्टाहरू चित्रण गर्न, तपाईंले पहिला पतली रेखाहरू प्रयोग गरेर तिनीहरूको स्थान निर्धारण गर्न आवश्यक छ। अब तपाई आफैंका अंगहरू आफुलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। हामी बाँकी बालहरू चित्रण गर्छौं र पखेटामा जान्छौं। अब तपाईलाई पूरै आकर्षित गर्न आवश्यक छ। तपाईं रंगीन पेंसिलमा लिन सक्नुहुन्छ र तस्वीर प्यान्ट गर्न सक्नुहुनेछ। स्पार्कको शरीर बैंगनीमा चित्रित हुन्छ। हामी यसलाई मा ताराहरू चित्रण गर्छौं, जस्तै यो वर्णन गरिएको थियो। हामी पूरै र अनुहार हौं।
हामी "मटो लिटिल टनी" कसरी आकर्षित गर्ने बारे कुराकानी जारी गर्दछौं। अब हामी राजकुमारी सेलेस्टेिया चित्रण गर्नेछौं। पहिले दुई ओभर ड्राओ। एक सानो - टाउकोको लागि। र अर्को ओवल - ट्रंकको लागि। उच्च सानो ओवल विभाजित दुई भागहरु मा विभाजित छ। निचो भाग माथिल्लो एक भन्दा कम संकीर्ण हुनुपर्छ। टनी प्रोफाइलमा चित्रण गरिनेछ। आँख, पिक्सेल र मोठे आकारको आकार बनाउनुहोस्। हामी मुख र नाक जोड्छौं। कान आउँदैछ र लामो सिङ्ग। यो खराब छ, त्यसैले तपाईंलाई यसमा पट्टीहरू आकर्षित गर्न आवश्यक छ। आँखाहरूमा विद्यार्थीहरू आकर्षित गर्छन्। हामी माने र मुकुटको माथिल्लो भाग थप्नुहोस्। अर्कोले बहुमूल्य पत्थर संग सेलेस्टेनिया, गर्दन र हार को एक लामो म्यान को आकर्षित गर्छन। हामी अगाडिको खुट्टा प्रतिनिधित्व गर्दछौं। दायाँ पैर बायाँ पैदलको लागि जानुपर्छ। अब तपाईं पछाडी हजुरआमा गर्न सक्नुहुन्छ। सेलेस्टेियासँग एक लामो लामो पल छ। यसलाई ड्राउनुहोस्। हामी हिपमा सूर्य चित्रण गर्छौं। रेखाचित्र "मई लिटल टट्टु" पेन्सिलले अझ राम्रो देख्नेछ, यदि तपाईंले तिनीहरूलाई कलमको साथमा राख्नुहुन्छ।
हेडको रूपरेखा ड्राउनुहोस्। हामी ट्रंकमा आकार दिन्छौं। पछाडि हामी आर्नुहोस्। हामी टाउको र टाउको रेखासँग जोड्दछौं। त्यसपछि हामी खुट्टाहरू तान्छौं। टाउकोमा तपाईलाई आफ्नो कान, मुस्कान र आँखा चित्रण गर्न आवश्यक छ। इंद्रधनुषको रूपमा प्राय: रहस्यमय छ। नाक तान्नुहोस्। अब तपाईं ईन्टर ड्राइंग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हामी गर्दन र अगाडि खुट्टाहरू चित्रण गर्छौं। हामी ट्रंक सही आकार दिन्छौं र बाहिरी खुट्टाहरू समाप्त गर्दछौं। यो पखेटा र एक खराबी पूर थप्न बनी रहन्छ। आफ्नो हिपमा क्लाउडसँग इंद्रधनुषको बारेमा नबिर्सनुहोस्। यो केवल इंद्रधनुष ड्यास रंग्न रहिरहन्छ। यो धेरै सरल छ। हामी इंद्रधनुषका सबै रंगहरूमा पूरै र म्यानलाई चित्रण गर्छौं। आँखाहरू गुलाबी बनाउँछन्। शरीर नीलोमा पेंट गरिएको छ। हामी कसरी "शक्तिशाली तातो टट्टू" आकर्षित गर्न बारेमा कुरा समाप्त भयो। यो फर्काउँछ कि सबै भन्दा राम्रो जस्तो देखिन्छ जस्तो कि यो सबै भन्दा राम्रो छैन। मुख्य कुरा धैर्य र रचनात्मक कल्पना हुनु हो। त्यसपछि यो काम गर्न बाध्य छ।
बोरिंग गर्दा के तपाईं आकर्षित गर्न सक्नुहुनेछ, एक रोमाञ्चक प्रक्रियामा चित्रण गर्दै हुनुहुन्छ?
गणना Shcherbatova को gothic Manor घर: इतिहास र आधुनिक फोटो
एफिससका मा Artemis को मन्दिर
क्रिसमस बलहरू आफ्नै हातले
हामी आफ्नै हातले मचान बेड गर्छन्। लाभ, बेफाइदा र निर्माण प्रक्रिया
जीवन - यो के हो? अवधारणा, प्रकार र मूल्य सर्तहरू
व्यावहारिक सल्लाह: कसरी प्लास्टिक डुङ्गा चयन गर्न
संसारको केही भागमा चीन छ? देश बारेमा रोचक तथ्य